Saheru - Wikipedia
9,200,000 km2 (3,600,000 skw mi)
Rudhende rwePakati pe Afurika
23°O 13°B Mapangana: 23°O 13°B
Saheru (Chiarabhu: ساحل‎ sāḥil, Sahel; "kosti, hombekombe") irhewumu yeupangahwewa (ecoclimatic) ne rutaramhenyuchisi (biogeographic) yerudarikira muAfurika iri pakati peSahara kumaodzanyemba uye Savhana yeSudhani kuchamhembe . Ine hwewa hwakaita kaumhari (semi-arid), inotandamuka hwakachingamira rumbariro rwe chamhembe-pakati che Maodzanyemba eAfurika pakati pe Gungwa re Atirandiki ne Bhahari Dzvuku.
Saheru chikamu cheAfurika chinosanganisa madokero ne mabvazuva ekumaodzanyemba eSenegaru, kuchamhembe cheMoritaniya, pakati peMaari, kumaodzanyemba eBhurukina Faso, uye kuchamhembe chaiko chaiko kweArujeriya, Naija, kumaodzanyemba chaiko chaiko kweNaijeriya, kumaodzanyemba chaiko chaiko kweKameruni uye Rudhende rwe Pakati peAfurika, pakati peChadhi, pakati ne kuchamhembe cheSudhani, kuchamhembe chaiko chaiko kweSudhani Chamhembe, Eritiriya ne kumaodzanyemba chaiko chaiko kwe Itopiya.
Nenhoroondo, madokero eSahru anowanzo danwa se ivhu reSudhani (bilād as-sūdān بلاد السودان "Ivhu re Sudhani"). Bhande iri rakagadzwa pakati pe Sahara ne nzvimbo dzekosti reMadokero eAfurika.
Shoko rekuti "Saheru" rakatorwa kubva kuChiarabhu pashoko rekuti, الساحل al-sāḥil. Sāḥil zvinoreva kuti "kosti, hombekombe", rinotsanangurwa richinzi rinoreva rutivi rwekuchamhembe cheruzhinji rweSahara. Asi vamwe vanoti rakabva parimwe shoko reChiarabhu rekuti سهل sahl "rubaya".
Saheru rinotora 5,900 km (3,670 mi) kubva kuGungwa reAtirandiki kumadokero eBhahari Tsvuku kumabvazuva, mubhande rinosaiyana siyana kubva kuzviuru zvemakiromita (c. 600 mamairi) muhupamhi, rinofukidza ruwa re 3,053,200 maskweya kiromita (1,178,850 skw mi).
↑ 1.0 1.1 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/Sahel
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Saheru&oldid=90245"
Last edited on 30 Mbudzi 2021, at 13:02
This page was last edited on 30 Mbudzi 2021, at 13:02.